गणतन्त्रको शल्यक्रिया – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२५ असार २०७७, बिहीबार २०:१९ English
रामकृष्ण आचार्य, रामेछाप, १५ जेठ । हाम्रो देशको अतीतलाई कोट्याउने हो भने यहा धेरै राजनैतिक परिवर्तनहरु भएका छन् । कहिले सहज रुपमा त कहिले हजारौ नेपालीले देह त्याग गरेपछि मात्र परिबर्तन सम्भब भएका छन् । हामीले पनि देख्न पाएको एउटा परिबर्तन हो गणतन्त्रात्मक नेपाल । यो परिबर्तनमा तत्कालिन माओबादीको जनयुद्ध देखि २०६२/६३ को जन आन्दोलन सम्मको ठूलो योगदान छ । आज हामी १३ औ गणतन्त्र दिबस मनाइरहेका छौँ । यो दिवस मनाइरहंदा केही प्रश्नहरुले आफैलाई जिस्काउछ, के हामीले ल्याएको गणतन्त्र पूर्ण प्रभाबकारी छ ? सिङ्गो देशले गणतन्त्रको पूर्ण प्रभाबकारिता आत्मसाथ गर्न पाएको छ ? कि हाम्रो गणतन्त्रको फाइदा अर्कै मुलुकले लिएको छ ? यस्ता प्रश्नको मुखे जवाफ सबैले दिन सक्छन्, तर मुटु सम्म मख्ख हुने गरी जबाफ दिने कुनै माइकलाल आजसम्म नेपालमा जन्मिएन । सामाजिक सन्जालदेखि बिभिन्न मिडियामा आएको बहस सुन्ने हो भने सबैको ओठे जबाफ मात्र सुन्न सकिन्छ । लाग्छ कहिले त कानै थुनेर बसौ ।
गणतन्त्र स्थापनाको सुरुवातसंग राजतन्त्रको अवसान जोडिएको छ। राजालाई गद्दिबाट गलत्याएर बालाजु मास्थिरको जङ्गलमा पुर्याउनु चानचुने कुरा हैन, तर यो खुसीसंग हामीले आज के उपलब्धी सापटी लियौ त ? गला पूरै अबरुद्ध हुन्छ यस्तो प्रश्नले पनि, आज अधिकांश नेपाली राजतन्त्र फ्यालेकोमा गल्ति महशुस गरिरहेका छन्, यसको मतलब मेरो धारणा राजा चाहिन्छ भन्ने हैन, हामीलाई राजा आबश्यक थिएन फ्याल्यौ राम्रो भयो तर राजा फ्यालेपछि अरु छोटे राजाहरुले देशमा के आमूल परिबर्तनहरु ल्याएत ? यो महत्वपूर्ण सवाल हो । चाहेको कुरा बोल्न पाउने अबस्था अझै छैन, सामाजिक सन्जालमा खुलेआम आफ्ना बिचार राख्ने अबस्था अझै छैन, खाना नपुग्नेहरु भोकै छन्, बढी हुनेहरु डकारिरहेका छन्, समाजमा ब्याप्त कुरिती र कु–संस्कार जहाको तही छ । अनि गणतन्त्रले हामीलाई दिएको उपलब्धी चाहि के हो त ? भर्खर मात्र सुन्दा पनि आङ जिरिङ्ग हुने घटना घट्यो रुकुम पश्चिममा । यही हो त गणतन्त्रको उपहार ?
हामी सबैलाई यादगार छ, हाम्रो छिमेकी मूलुक भारतले हाम्रै भूमिमा आएर बाटो खनी उद्घाटन समेत गर्ने दुष्साहस गर्यो । यो भनेको हाम्री नेपाल आमामाथि भएको ठूलो दमन र अत्याचार हो । हामी कोही नेपालीलाई पनि यो कदम सह्य हुदैन र हुने छैन पनि । यसै पिडाको आत्मसाथ गर्दै नेपाल सरकारले तुरुन्तै आफ्नो भारतले मिचेको भूमि लिपुलेक लिम्पियाधुरासहित समेटेर नया नक्सा जारी गर्यो । यो कार्यको लागि हामी सबैले नेपाल सरकारलाई सल्युट गर्नुपर्छ । भारतको अगाडि यतिको साहस देखाउनु चानचुने कुरा हैन तर फेरि एउटै कुराले घरिघरी घोच्छ हाम्रै भूमि हिजाको नक्सामा चाहि किन अटाइएन । यी प्रसङ्ग फरक बिषयका हुनसक्लान् । जब सरकारले परिमार्जित नेपालको नक्सा समेटी आफ्नो निशानी चिन्ह जारी गर्नको लागि संसदमा संबिधान शंसोधनको प्रस्ताब लग्यो तब एकाएक कसैको दबाबमा उक्त कार्यसूचीलाई नै हटाइयो। काङ्गेसको आग्रहमा हटाइएको हो भन्ने सरकारको भनाई छ । यसको मतलब के काङ्ग्रेसलाई चाहि आफ्नो भूमि चाहिदैन त ? तर्क जति गरे पनि हामी अझ स्वतन्त्र छैनौ भन्ने यो एउटा गतिलो प्रमाण हो । यस्तो अबस्थामा छ हामीले ल्याएको हाम्रो प्रिय गणतन्त्र ।
अन्त्यमा, सबै नकारात्मक बिचार मात्रै पनि राख्नु हुन्न, गणतन्त्रले हामीलाई केही सकारात्मक कुरा पनि दिएको छ । केही हदसम्म लैङ्गिक बिभेदको अन्त्य भएको छ, नारीलाई घरको मात्रै काममा ब्यस्त बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो समाजले क्रमशः सभामुख, प्रधानन्यायधिश हुदै राष्ट्रपतिसम्म पाएको छ । देश संघियताको अबधारणामा चलेको छ । सिंहदरबार गाउ गाउमा पुगेको छ, केही स्थानीय तह बिबादमा आएपनि धेरै स्थानीय तहले आफ्ना जनप्रतिनीधिमार्फत गाउ गाउमा नागरिकलाई सेवा दिई रहेका छन् । कानुनी राज्यको अलिकति मात्र भएपनि आभाष हुन थालेको छ। नागरिकहरु पूर्ण सचेत हुन थालेका छन् । शान्तिको पालुवा बिस्तारै पलाउदै गइरहेको छ। यी गणतन्त्रका सकारात्मक पक्ष हुन । फरक यति हो जुन आशाको दियो बाली हामीले गणतन्त्र ल्यायौ, आज त्यो दियो धिपधिप गरिरहेको छ । यो दियोलाई निभ्न दिनु हुन्न, यसको साथै अहिले बिश्वमै देखिएको जुन कोरोनाको संक्रमण छ यसको छिट्टै अन्त्य होस्, सबै नेपालीमा शान्ति खुसी अमनचैन र बिश्वासको समय आओस्, हामी सबैलाई गणतन्त्र दिवसको शुभकामना ।
१५ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १९:५८ मा प्रकाशित
युवा संघ जाजरकोटमा निलम्बित संयोजकद्वारा पत्रकारमाथि भौतिक हमलाको प्रयास	२५ असार २०७७, बिहीबार २३:२०
विद्यालय नखुलेपछि विद्यार्थी अन्योलमा	२५ असार २०७७, बिहीबार १५:४३
आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले सम्हाले कार्यभार	२५ असार २०७७, बिहीबार १३:५७
नवनियुक्त आईजीपी क्षेत्रीको चेतावनी, ‘बर्दीमा दाग लगाए निर्मम कारवाही गरिन्छ’	२५ असार २०७७, बिहीबार १३:३६
आइजिपी क्षेत्रीले लगाए दर्ज्यानी चिन्ह	२५ असार २०७७, बिहीबार १३:२७
निवर्तमान आईजीपी ज्ञवाली भन्छन्, ‘सबै योजना थाँती राख्नु पर्दा थकथकी लागेको छ’	२५ असार २०७७, बिहीबार ०९:००
युवा संघ जाजरकोटमा निलम्बित संयोजकद्वारा पत्रकारमाथि भौतिक हमलाको प्रयास
२५ असार २०७७, बिहीबार २३:२०
भारतीय समाचार च्यानलको प्रशारण बन्द
२५ असार २०७७, बिहीबार २२:११
शन्देसमूलक तीज गीत ‘सँगै नाचौँ गाईज’ बजारमा
२५ असार २०७७, बिहीबार १८:५३